Al-shabaab oo Dadka ku Hoos nool u Ogalaaday in ay Gargaar u raadsadaan meelaha ka...
Al-shabaab ayaa shaaca ka qaaday inay u ogolaanayaan dadka abaaruhu sameeyeen ee ku sugan degaanada ay gacanta ku hayaan ee Koofurta iyo bartamaha Soomaaliya si ay u raadsadaan cuno balse waxaa taagan carqaladeenti ay ku hayeen hay’adaha gargaarka inay tagaan deganadooda.
Madaxa gudmadka abaaraha ee Al-shabab Sheekh Suldan Calaa Maxamed ayaa sheegay inaysan u diidi doonin dadka inay deganadooda ka baxaan ayna raadsadaan cuno iyo biyo ayna xor u yihiin meel waliba ay tagayaan.
Madaxa Xafiiska gurmadka Bini aadanimo Jastin Bardi ayaa horey u sheegay inay qaabileen dadka kasoo baxay deganada Al-shabab ee gurmadka soo raadsaday balse waxa uu walaac ka muujiyay suurta galnimada in dadkaasi ay ku laabtaan deganada Al-shabab.
Madaxa gurmadka abaaraha Al-shabab ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan gurmad ay iyagu dadkaasi u sameeyen.
Waxaa laga digayaa in hadii aysan bisha April roobabkii Gu a aysan dain ay dhalan karto macluul daran.